Ogaden News Agency (ONA) – Caalamku waa inuu Ethiopia ku khasbaa in ay Amnesty International gasho gudaha Ogaadeeniya.
Caalamku waa inuu Ethiopia ku khasbaa in ay Amnesty International gasho gudaha Ogaadeeniya.
Posted by ONA Admin	/ August 18, 2014
Kulan looga hadlayo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee mar walba ka dhaca ogaadeeniya ayaa waxaa soo qaban qaabiyey gabdho aad u da’yar oo u dhashay Ogaadeeniya waxna ka barta jaamacada AlbertaUniversity ee magaalada Edmonton ee dalka Canada. Munaasabadaa oy ka soo qaybgaleen ardayda jaamacadda iyo Prof. wax ka dhiga jaamacadda iyo dadka daneeya qadiyadda Ogadenya ayaa si fiican loo dhagaystay warqadihii loosoo gudbiyay.
Gabdhahan ayaa doonaya in ay jaamacadaha dalka Canada gaadhsiiyaan xaalada xuquuqda aadanaha ee Ogaadeeniya ka jirta.
Yasmin ugaas ayaa kulanka furtay iyadoo ka hadashay xaalada guud ee ka jirta ogaadeeniya, waxaana sidoo kale goob ta hadal ka jeediyey DR Maxamuud Ugaas oo ahaa aasaasaha barnaamijka, khadiya C/llahi ayaa muuqaalo murugo leh ku soo bandhigtay goobta kuwaasoo muujinayey tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhaca maalin walba ogaadeeniya.
Kulankaa ayaa loogu macag daray caalamku waa in ay Itoobiya ku khasbaan in Amnesty Intrnational gasho gudaha ogaadeeniya ( let the world force Ethiopia to allow Amnesty international to go Ogaden), iyadoo kulanka dambe la rajaynayo in ay ka soo qayb galaan masuuliyiin ka socda xuquuqda aadanaha iyo macalimiinta jaamacadaha Canada wax ka dhiga.
Warbixintan ayaa la filayaa in aduunka la gaadhsiiyo in hay’adaha xuquuqul insaanku galaan Ogaadeeniya loo ogolaado cadaadisna lagu saaro Ethiopia midaas.
Waxaad kala socon kartaa boga barnaamijka loo sameeyey ;